विदेश घुम्न अब भ्याक्सिन पासपोर्ट चाहिने! - ParyatanBazar.com
विदेश घुम्न अब भ्याक्सिन पासपोर्ट चाहिने!
पौष १४,काठमाण्डौ। अमेरिका लगायत अन्य ठूला देशमा कोरोना भाइरसको खोप आएसँगै धेरैले फिल्म हेर्न, सपिङ गर्न र घुम्न जाने सपना बुन्न थालिसकेका छन्। तर, यदि तपाई अर्को वर्ष विदेश यात्रा गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भने तपाईँलाई भ्याक्सिन पासपोर्ट चाहिन सक्छ।
सिएनएन बिजनेसका अनुसार कयौँ कम्पनी र प्रविधि समुहले कोभिड टेस्ट परीक्षण तथा खोपहरुको विवरण बारे जानकारी दिन स्मार्टफोन एप विकास गर्न सुरु गरेका छन्। ताकी सबैले आफ्नो डिजिटल स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देखाएर ढुक्कले घम्न सक्छन्।
जेनेभामा आधारित ‘द कमन प्रोजेक्ट’को पहलमा बनेको कमन ट्रस्ट नेटवर्कले ‘कमन पास’ नामक एप बनाएको छ। जसमा प्रयोगकर्ताले आफ्नो कोभिड टेस्ट परीक्षणको परीणाम वा कोभिड खोपको परीणाम जस्ता मेडिकल डाटा अपलोड गर्न सक्छन्। यसबाट प्रयोगकर्ताले आफ्नो डिजिटल स्वास्थ्य प्रमाणपत्र बनाएर यात्राको क्रममा चाहिने मेडिकल डाटा मोबाइल बाटै देखाउन सक्ने सिएनएनले बताएकाे छ।
यो डाटालाई क्यूआर कोडको रुपमा पनि पास बनाउन सकिन्छ, जसको मार्फत् प्रयोगकर्ताले आफ्नो संवेदनशील जानकारी नदेखाइ अधिकारीहरुलाई सिधैँ मोबाइलबाट कम्प्यूटरमा पठाउन सक्छन्।
‘हरेक पटक विदेश यात्रा गर्दा कोभिड परीक्षण गर्न सकिन्छ, तर हरेक पटक कोभिड खोप लगाउन सम्भव भने हुँदैन,’ द कमन प्रोजेक्टका मार्केटिङ तथा कम्यूनिकेसन प्रमुख थोमस क्र्याम्प्टन भन्छन्, ‘यसको लागि कोभिड खोपको मेडिकल प्रमाणपत्र कागजातको रुपमा बोकेर हिँड्नु भन्दा डिजिटल कार्ड बोक्न सहज हुन्छ। यही उद्देश्य जारी गर्न हामीले डिजिटल भ्याक्सिन पासपोर्टको तयारीमा लागेका हौँ।’
अन्य ठूला टेक कम्पनी आइबिएम र लिनक्स फाउन्डेसनले पनि डिजिटल मेडिकल पास बनाएका छन्। जसमा यी कम्पनीले प्रयोगकर्ताको कोभिड परीक्षण, तापक्रम जाँच र खोपको रेकर्ड संकलन गरेर मोबाइल वालेटमा राख्ने गर्छन्।
यसअघि पनि एप्पल र गुगलले ब्लुटुथमा आधारित प्रणाली विकास गरेको थियो। जसमार्फत् कम्पनीले आफ्ना प्रयोगकर्ता कोभिड संक्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएमा सूचित गराउने फिचर ल्याएको सिएनएन बिजनेसले बताएको छ।